KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
YƐNYA anwea fi he? Yɛnya fi mmeae pii. Nanso nea yɛrebɛka ho asɛm yi deɛ, ebia ɛmmaa w’adwenem da. Ɛyɛ apataa bi a ɔyam nsuo ase nneɛma bi ma ɛyɛ anwea muhumuhu. Wɔfrɛ no pokye (parrot fish); ebinom nso frɛ no sankomadom anaa sankyemole.
Saa apataa yi nyɛ na wɔ po mu wɔ wiase nyinaa. Aboa yi we po ase nneɛma bi na ɔfefe aduane a ɛwɔ mu. Afei ɔpu nea aka no fi ne yam gu te sɛ anwea. N’apantan ne ne se yɛ den, na ɛno na ɛtumi boa ma ɔyam nneɛma a ɛyɛ den no. Saa apataa yi gu ahorow na ebi tumi di mfe 20 nanso na ne se baako mpo ho nkae.
Baabi wɔ hɔ a, pokye ne “kɔntrata” a ɔyɛ anwea sen biribi foforo biara. Animdefo bi ka sɛ pokye baako bɛtumi ayɛ anwea kilogram 100 afe biara.
Adwuma foforo bi wɔ hɔ a pokye yɛ. Apataa yi we nneɛma ma ɛpo ase te kama. Wei kyerɛ sɛ bere a pokye redidi nyinaa na ɔresiesie po ase nso. Baabi a pokye ne nsuo mu mmoa foforo biara nni no, nwura, apopobibire ne nneɛma funu hyɛ hɔ ma. Nwoma bi a wɔato din Reef Life ka sɛ, “Sɛ ɛnyɛ mmoa yi a, anka po ase ayɛ pɔtɔɔ tantaantan.”
Ade foforo wɔ apataa yi ho a ɛyɛ nwonwa. Ɔyɛ n’adwuma nyinaa awia, enti ɛdu anadwo a ɔda ma ne ho tɔ no. Sɛ yɛka sɛ anadwo mu yɛ sum a, yɛhu wei wɔ po ase paa, efisɛ saa bere no na mmoa pii kɔ ahayɔ. Enti sɛ pokye reda a, ɔkɔhyɛ tokuru mu baabi, nanso ɛhɔ mpo no, bonsu a ɔkɔm de no bɛtumi ato ahyɛ ne so.
Biribi foforo wɔ hɔ a pokye yɛ de bɔ ne ban. Ɛdu anadwo a, apataa yi pu biribi de kata ne ho nyinaa. “Atade” yi yɛ nahanaha te sɛ ntontonnan. Ɛbɔn paa, enti ɛpam bonsu ne atamfo foforo biara fi ne ho.
Pokye nyɛ na wɔ po ase, na yɛreka mpataa a wɔn ho yɛ fɛ a, ɔka ho. Anini ne abedeɛ nyinaa yɛ kɔla kɔla pii, nanso bere a wɔrenyin no na ɛresesa. Biribi wɔ mmoa yi ho a ɛma wɔn ho yɛ anika paa. Sɛ nnipa amfa wɔn asɛm ankɔ wɔn so a, wohu sɛ wɔyɛ mmoa a wɔn ho dwo. Enti sɛ obi pɛ sɛ ɔhwɛ wɔn sua wɔn ho ade a, ɛnyɛ den.
Sɛnea pokye we po ase nneɛma graugrau no yɛ anika, enti wɔn a wɔkɔ po ase ani gye wɔn ho paa. Bere a pokye redannan wɔn ho de wɔn ahoɔfɛ rekyerɛ nyinaa na wɔresiesie wɔn atenae sɛnea ɛbɛyɛ a mmoa ne nnipa nyinaa ani bɛka hɔ.
POKYE HO NSƐM
Pokye (nyansahufo frɛ no Scaridae) yɛ apataa a ɔda abusua kɛse bi mu. Pokye ahorow ahorow bɛyɛ 80 na ɛwɔ po mu. Apataa yi de pokye wɔ borɔfo kasa mu, efisɛ n’ano ne ako ano sɛ. Sɛ aboa yi da hɔ a, ne tenten bɛyɛ sɛntimita 50 kɔsi 100.